Musharax Madaxweyne Khayre oo lagu soo dhaweeyay Madaxtooyada Jabuuti (Daawo Sawirada) | Salaan Media
Musharax Madaxweyne Khayre oo lagu soo dhaweeyay Madaxtooyada Jabuuti (Daawo Sawirada)
Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka, Xasan Cali Khayre oo dhawaan shaaciyay musharaxnimadiisa madaxtinimada dalka ayaa maanta kulan la qaatay madaxweynaha dowladd aan walaalaha nahay ee Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle.
Inkasta oo aan si rasmi ah loo shaacin waxay ay ka wada hadleen waxaa la sheegayaan in kulanka looga hadlay arrimo muhiim ah oo ay kamid yihiin doorashooyinka dalka, xilliga kala guurka ah iyo sida ay muhiim u tahay in xilligaan looga gudbo mas’uuliyad iyo deganaan siyaasadeed iyo in la joogteeyo dhaqan siyaasadeedka Soomaalidu ay caanka ku aheyd ee salka ku hayay in si dimuquraadi ah xukunka dalka loogu kala wareego.
Ismaaciil Cumar Geelle oo Khayre ku amaantay dadaal iyo karti dheeraad ah oo wax badan u tahay shacabka Soomaaliyeed intii uu wasiirka koowaad ahaa, ayaa sheegay sababta mar kasta ay shacabka Soomaaliyeed u garab taaganyihiin ay tahay in cagaheeda ku istaagto una gaarto horumar ballaaran iyo xasilooni.
Xasan Khayre ayaa Madaxweynaha iyo shacabka Jabuuti uga mahad celiyay dib u yagleelidda dowladnimada Soomaaliya iyo garab istaagga joogtada ah, waxuuna u caddeeyay in ummadda Soomaaliyeed ay qalbiga ka ogsoonyihiin in xilli adduunyada inteeda kale ay ka jeesatay reer Jabuuti ay ku dhiiradeen qaabkii dowladnimadii burburtay dib loogu soo celin lahaa.
Dadka falanqeeya siyaasadda ayaa socdaalka Xasan Cali Khayre ee Jabuuti ka billaawday waxay ku macneeyeen mid xambaarsan qaab siyaasadeed ka duwan, hannaankii hore siyaasiyiinta Soomaaliyeed ku wajihi jireen socodsiinta ololahooda madaxtinimada. Kulanka Geelle iyo Khayre ayaa kusoo aadaya iyada oo shalay ay Asmara ku kulmeen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Ereteriya oo xurguf xoogani kala dhexeyso Jabuuti.